Akụkọ - Etu esi ejikọ, wụnye ma rụkwaa ụdọ njikọ njikọta nke ndị na -egwu ala?
Etu esi ejikọ, wụnye na idozigharị ụdọ cha cha nke na -egwu ala?
Dị ka onye nrụpụta agbụ ígwè njikọta nchara maka afọ 30, anyị nwere obi ụtọ ịkekọrịta ụzọ njikọta, nwụnye na ndozi nke Chains Flat Link Chains.
1. Atụmatụ Ngwaahịa
Ngwongwo njikọ njikọ dị larịị nwere ike dị elu nwere njiri mara nke ukwuu, nguzogide siri ike, mmetụta siri ike na ogologo ndụ ike ọgwụgwụ.
2. Ebumnuche na Akụkụ nke Ngwa
A na -ejikarị ya eme ihe na Armored Face Conveyor (AFC) na Onye na -ebugharị Stage Beam (BSL) na ebe a na -egwupụta coal.
3. Ụkpụrụ Ndị Isi
4. Ịrụkọ ọrụ na nwụnye
4.1 Chains njikọ ejikọtara ọnụ
Njikọ ziri ezi nke agbụ njikọ njikọ dị larịị dị mkpa maka ọrụ onye na -ebu ya na -aga nke ọma. Mgbe agbụ ahụ hapụrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, a na-ejikọ ya na njikọ njikọ otu na otu iji hụ na onye nchacha ahụ kwụ n'ahịrị kwụ ọtọ yana nkwụsi ike nke onye nchapu ahụ n'etiti uzo dị n'etiti. Debe agbụ njikọ ejikọtara ọnụ n'igbe mkpọ ma tinye akara n'agbụ nke ọ bụla ejikọtara. Agaghị eji ụdọ abụọ ejikọtara ọnụ iche. Ndidi ejikọ na -ezo aka n'ogo kachasị ekwe ka agbụ njikọ ọ bụla.
4.2 nwụnye njikọ njikọta ewepụghị
A na -achịkọta ụdọ njikọ ejikọtara ọnụ nke ọma na ihe nchacha iji kwalite arụmọrụ nke yinye ahụ. Nke a ga -agba mbọ hụ na a na -ebelata nnabata dị n'akụkụ abụọ nke yinye yana na a na -ejikwa esemokwu eriri ọkụ nke ọma mgbe ebido ebubata ihe nchapu. Gbaa mbọ hụ ihu dị mma kwụ ọtọ wee belata ihe dị iche na mbute onwe ya.
A na -arụnye agbụ abụọ abụọ, a na -ejikọkwa ogologo agbụ na ogologo agbụ abụọ n'otu n'otu. A na -agbakọkarị mkpamkpa ọhụrụ na ihe mgbagwoju anya mgbe ị na -etinye ụdọ njikọ ọhụrụ dị larịị.
Hụ na agbụ njikọ njikọ dị larịị anaghị agba ọsọ mgbe etinyere ya na mbụ na -enweghị nkwa mmanye. Ọ bụrụ na ọ na -agba n'etinyeghị mmanụ, njikọ ụdọ ga -eyi ngwa ngwa.
Gbaa mbọ hụ na usoro nrụrụ aka ziri ezi dabara adaba maka igwe na -ebufe ihe na igwe mbufe. Lelee esemokwu tupu ụbọchị ọ bụla iji mepụta uru esemokwu dabara adaba maka yinye ọ bụla. N'ihi na agbụ agbụ ahụ na nkwado ya na onye na -ebu ya ga -adị mkpa, izu ole na ole mbụ nke ịrụ ọrụ akụrụngwa dị oke mkpa.
5. Mmezi Chains Flat Link
Ihe eji ebu ihe, ihe nchapu na njikọ njikọ njikọ (njikọta) bụ ihe oriri, nke dị mfe iyi ma mebie mgbe ejiri ya mee ihe ọzọ. Ya mere, njikọta njikọ njikọta dị larịị dị ezigbo mkpa iji gbatịkwuo ndụ ọrụ nke yinye ahụ wee hụ na ọghọm kacha nta nke ọdịda.
Nọgide na -enwe ịdị kwụ ọtọ nke elu ọrụ ka o kwere mee.
Ọ bụrụ na ihu na -arụ ọrụ akwụghị ọtọ, ọ nwere ike bute ogo dị iche iche nke iyi na ịgbatị agbụ ahụ.
A na -ebelata akụkụ ihu na azụ nke onye na -akpacha ajị. Ọ bụrụ na ọ siri oke ike, ọ ga -abawanye ike achọrọ yana akwa yinye.
Mezue usoro njikwa yinye iji hụ na arụchara ọrụ niile yana arụ ọrụ kacha mma n'okpuru nduzi nke onye na -ebu ebu, soro usoro, debe ma debe ndekọ.
5.2 Ntụzi mmezi
N'ọtụtụ ebe a na -egwupụta coal, omume mmezi nke agbụ njikọ dị larịị bụ ọkachasị nkwenye nke onye na -arụ ọrụ na -eme ka mgbachi anya, nke nwere ike ijikwa arụmọrụ nke ọma. N'ihi na ọnọdụ nke ibelata ọnụego nje bụ ihe dị mkpa iji gbochie ọdịda ọdịda nke yinye ahụ. Ihe ndị a bụ nchịkọta nke isi ihe ụfọdụ, a ga -etinyerịrị aro ndị nrụpụta ebu na -atụpụta.
- Lelee esemokwu tupu ụbọchị ọ bụla, ọkachasị izu abụọ ma ọ bụ atọ tupu nrụnye ọhụrụ na arụ ọrụ nke yinye.
- Lelee obere akpa ebu tupu ịmalite ịhụ na enweghị ntụpọ ma ọ bụ nsogbu ọ bụla.
- Dochie ihe mebiri emebi na njikọ yinye ozugbo enwere ike.
- Wepụ ụdọ ọ bụla mebiri emebi ma ọ bụ gbajie wee lelee ogologo nke ụdọ dị n'akụkụ. Ọ bụrụ na ọ naghị emezu ihe achọrọ, ekwesịrị iwepụ ya n'oge. Ọ bụrụ na a na -eyi akwa ahụ, a ga -edochi ụdọ abụọ ahụ n'otu oge ka ijigide njikọ nke agbụ ahụ.
- Lelee agbụ mebiri emebi, ihe mgbagwoju anya na sprockets wee dochie ha ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
- Lelee scraper ahụ maka mgbakwunye, efu na nke mebiri emebi.
- Lelee yinye maka iyi na ịgbatị. Maka iyi ma ọ bụ ịgbatị n'ime njikọ (na -egosi oke ibu) ma ọ bụ ha abụọ ga -agbatị agbụ ahụ.
Mgbe a na -ebufe ma na -agbatị agbụ njikọ njikọ dị larịị, o doro anya na enwere nrụrụ, na -ebute mmụba sitere n'okike n'ogologo njikọ njikọta. Nke a nwere ike imetụta ọnụ ọgụgụ njikọ ndị dị n'akụkụ, na -ebute ọgbaghara nke agbụ. N'okwu a, a ga -edochi akụkụ emetụtara, ma ọ bụrụ na agbụ agbụ ahụ, a ga -edochi ụdọ dị n'akụkụ abụọ n'otu oge ka ijigide njikọ nke ụdọ.
- n'ozuzu, agbatị agbatị agbụ ahụ ga -alaghachi n'ọkwa mbụ mgbe ebudatara ya. Uwe dị n'ime nke njikọ ahụ ga -abawanye oghere nke yinye ahụ, akụkụ mpụga nke njikọ ahụ agaghị agbanwe, mana ogologo nke agbụ ahụ ga -abawanye.
- a na -enye ya ohere iwelie oghere yinye site na 2.5%.
6. Chains Flat Link Ụgbọ njem na nchekwa
a. Lezienụ anya maka mgbochi nchara n'oge njem na nchekwa;
b. Oge nchekwa ekwesịghị ịfe ọnwa 6 iji gbochie nchara na ihe ndị ọzọ na -ebelata ndụ ọrụ.